Iyo Iyo Indasitiri Yefirimu
Iyo Acoustic Insulation Mubvunzo
Shandisazve Nyaya yacho
TSG Yakagamuchirwa Installers
Denga Kushambadzira Kwakarairirwa Mavhesi eiyo Silent Roof Systems
Shanyira Yedu Blog Zvekudzokorora pane Zviri kuenda
Dramadziro Inoderedza Mhepo Noise pane chero Metal kana imwe Hard Surface Roof Stosition
Kune Ruzha Kwakasangana Nedambudziko Kwauri?
Isu Tine Solution, Verengai On
Iyo O2 Arena kukuvara kwakakonzerwa panguva yeDutu Eunice. Zvikamu zvedenga rejira renzvimbo iyi, yaimbozivikanwa seMillennium Dome, yakatsemurwa nesimba remhepo dzedutu musi wa18 Kukadzi 2022.
Mubvunzo mumwe unobvunzwa Silent Roof Ltd pane regular nheyo iri
"Yakachengeteka sei kuiswa kweSilent Roof mumamiriro ekunze ane dutu?" Mufananidzo uri pamusoro ndeuyo wekumisikidzwa kweSilent Roof yakatorwa nguva pfupi mushure medutu Eunice apfuura nemuUK. Kuiswa kuri pauriri hwegumi hwechivako chakafumurwa nemamiriro ekunze. Isu tinofara kuzivisa, sezvauri kuona, izvi kana chero imwe yekumisikidzwa kwedu yakapera yakakuvadzwa nekuda kwedutu Eunice kana chero imwe yemadutu achangopfuura a10-2021.
Tarisa uone yedu Facebook peji pano
Vhidhiyo iyi inoratidza vagadziri vedu vakagadzwa TV & Studio Boka, vachishandisa logo ine stencilled kune yakapedzwa pamusoro pekuiswa kwaSilent Roof pa. London Film Studios.
Mifananidzo mishoma inoratidza kuiswa kweSilent Roof kuri kuitwa pauriri hwegumi hwechivako. Zvishoma zvakasiyana nemamiriro enguva dzose.
Isu paChinyararire Roof tiri vega Vepasi rese vanotengesa edu Akanyarara Roof zvinhu izvo Zvinoshamisa Zvinoderedza ruzha rwemvura runobva kumatenga edenga. Isu takavakirwa kumahombekombe ekumaodzanyemba kweUK, hofisi yedu yakanyoreswa iri muTorquay, Devon, UK. Isu tinoita kuisa munzvimbo dzese dzeUK tichitevedzera kumwe kugumira uye tinopa edu akasarudzika zvinhu kune vanoisa pasirese. Kufarira kutaura nesu nezve chirongwa chako? Unofarira kutengesa kunze? Tarisa uone pasi pasi peji rino, kana tifonere.
Runhare: 01803 203445 Nhare: 077865 76659
Maitiro ekumisa ruzha rwemvura padenga resimbi.
Isu paSilent Roof takagadzira mhinduro yedambudziko remvura inonamira ichibva padenga remhepo rakaoma kupinda munzvimbo yekugara kana yekushanda pasi. Isu tinoshandisa yedu Yekunze Rokuderedza Tekinoroji Chinyorwa pane maficha akadai saProfessor Metal Sheeting nezvimwe zvakadaro.
Kana yangoisa nzvimbo pazasi peya yakarapwa padenga pakarepo inobatsirwa kubva kuderedzwa kunoshamisa kwemvura inonaya kusvibiswa. Mifananidzo iri pane ino saiti mufananidzo wekuti iyo SRM inoshandiswa sei kune yakakura Profa Metal Roof paYunivhesiti yeMonster Factory muSouthall, London, munaGunyana 2018, ese 5400 mativi mativi ayo.
Mbiri Metal Roofing
Mbiri Metal Roofing Panels - Zvishoma Deredza Kunze Kwemvura
Mune mamiriro ezvinhu apo ruzha rwemvura pane simbi profile kana composite padenga zvinhu zvinokanganisa nzvimbo yebasa pazasi inotipa kufona paSilent Roof,
isu tine mhinduro yedambudziko rako. Mukubatana nenyika inotungamira kugadzirwa kwematatu matatu matatu matrix insulation zvigadzirwa iyo Silent Roof System, yakaiswa pamusoro padenga rako riripo Dhigiramu Inodzora ruzha rwemvura zvisati zvaitika. Ruzha rwekunaya pane idzi mhando dzezvivakwa padenga chinhu chinoshungurudza munzvimbo dzakawanda dzakasiyana; maindasitiri emafekitori zvikoro, zvikoro, chikamu chekuona zvemafirimu, mahofisi ekushambadzira uye nezvimwe.Mifananidzo iri pane ino saiti mufananidzo wekuti SRM inoiswa sei muhombe Profa Metal Roof paYuchi Monster Factory Roof muSouthall, London, muna Sep 2018 , dzese mativi mazana mana emakumi mairi nemakumi mairi.
Iyo Silent Roof kuisirwa inopedzwa nekukasira uye zvese zvekuisa basa zvinoitika kunze kwekunze kwechivako kuti zvisakanganise zviitiko zviri pasi pedenga remba zvine mubvunzo.
Colored Rooftop Kushambadzira
Ehe, yakanyarara Roof Rooftop kushambadza inowanikwa mune akasiyana mavara. Iva nekambani yako logo pane chero ANYENGA padenga. Hapana pendi, bvisa uye utamire chero nguva. UV yakadzikama.
Muna 2019, takasvikirwa nemhando yepasi rose kuburikidza nekambani yedu yekuisa iyo yakabvunza mubvunzo, 'ndeipi imwe mavara aripo?'
Asi kubvunza uku kwanga kusiri kwekutsikirira ruzha rwekunaya asi nekuda kwekushambadzira padenga. Chigadziko chechigadziko chemamwe ruvara chakafukidzwa nemuvara wakapesana wemakambani logo.
Iri basa raive remakiromita emamita emadziro emawere akataridzwa nezvivakwa zvakakwira zvakawanda, iyo yakanaka senge yekushambadzira.
Kutevera mwedzi yekutaurirana uye kuyedza mukati meDhipatimendi reR&D yezvigadzirwa zvedu kuGerman, vhezheni itsva yatinoreva se
Colored Silent Roof Material (CSRM), akaberekwa.
Iye zvino shandisa padenga remba rako kushambadza UYE kudzvinyirira rinosemesa remvura panguva imwe chete neiyi dzakasiyana musiyano weSilent Roof.
MUBVUNZO: Iyo INOGONESESA chikwama mari yeZVO ZVIMWE?
Iyo yekumisikidza nzira inotanga neiyo yepasi dura yeakasarudzwa ruvara, iyo kambani logo inoderedzwa kubva kune yakasarudzika yakatetepa nhete yeCSRM uye yakachengetedzwa kune base base layer. Yedu yekumisikidza kambani inogona kupa ino yekuisa sevhisi pasirese. Iwe une mamiriro anogona kubatsirwa kubva mukuvandudzwa kutsva uku? Zvepamusoro pemba, kushambadzira Bata US ikozvino kuti uwane rumwe ruzivo.
Zvinoshanda Sei ... Kunzwa Kutenda
Ndingarega sei kuti ruzha rwemvura ndiyo yakajairwa mubvunzo Iwe haugone kumisa mvura, asi Chinyararire Denga rinodzora zvikuru ruzha rwemvura kusvika kune kudedera.
Vhidhiyo pfupi pfupi yekuruboshwe inoratidza zvinonzwika mhedzisiro yekudonha kwemvura pane simbi.
Izvi zvinofanidza ruzha rwemvura ne uye pasina iyo bhenefiti chifukidzo cheSilent Roof zvinhu pane yakaoma nzvimbo. YEUKA, simudza vhoriyamu yechigadzirwa chako usati wadzvanya bhatani rekutamba. Iwo ruzha rwacho rwunofarira pamwe nevhidhiyo.
Iyo Iyo Indasitiri Yebasa - Shanyira Yedu Blog
Uri kubatanidzwa neiyo Iyo Firimu Bhizinesi?
Ruzha rwemvura idambudziko kwauri here? Isu tine mhinduro yekuti tingamisa sei kunaya kwemvura.
Nzvimbo yeMonster '
Muchirimo che2018, takagamuchira mubvunzo wakabvunza: -
"Mhoroi ... Izvi zvinogona kunge zvisina kujairika." Ini ndiine hombe yekuchengetera yatinoda kuridza chiratidzo kubva kunaya uye hatikwanisi kuisa chero chinhu mukati saka nzira dzakajairika dzekuisa hazvishande. "Chako chakanyarara Denga Rekushandisa chinogona kuzungunirwa kunze kune rimwe simbi yekuchengetedza imba?"
Iyi yekubvunza yakagadziridzwa kuva yekutanga Silent Roof kuisirwa kwakabatana nekurira kweizwi mukati meiyo Fekitori yeVhidhiyo. Izvo zvakachinja kuti iyo 'hombe yekuchengetera' AKA The Monster yakanga yawanikwa kuti igadzire seti yekutora mifananidzo. Aya akateedzana achaburitswa neSky Atlantic gare gare muna 2019. Chinyararire Roof yakaunza mhinduro kuchinetso chemvura inonaya ichibva kumatenga akaomesesa edenga. Ruzha rwemvura rwunokanganisa zviitiko zvekurekodha zvevashandi vekutora mifananidzo mune yakatarwa iri pasi peimba yekuchengetera. Kuisirwa uku kwakabudirira zvekuti mimwe mibvunzo yakatevera zvakare yakabatana neiyo Indasitiri Yemafirimu. Pakutanga kwa2019, iyo nyowani Sam Mendes yekugadzira '1917' kubva kuStudioworks yakabata Silent Roof Ltd kuti ipe, Rain Noise Reduction Technology kunzvimbo dzekupepeta munzvimbo yeSalisbury yeUK.
Yakanyarara Roof muUSA
Moffett Productions yakamira muUSA uye vashandisa chigadzirwa chedu pafirimu studio muHouston, Texas. Tichaongorora chiitiko cheMoffett Productions nechido.
Iwe une mamiriro akafanana here? Bata Nesu - Isu tine mhinduro - Hapasisina kunhuwa kwemheremhere yemvura.
TV STUDIO GROUP Ltd nyanzvi mune zvivakwa zvenguva pfupi, studio fit-outs, acoustic kurapwa uye kugadzirwa kwechiitiko Pasi Pose TV neFirimu Studio Group inyanzvi mukuisa musina mutsindo, kurapa kweacoustic, studio fit-outs, kuvaka zvivakwa zvechigarire uye zvimiro zvenguva pfupi senge; pop-up studio, mashopu, dzimba dzekudyira dziri kure nevamwe uye zvimwe zvivakwa zvekubatsira. Ivo ruzivo uye kuzvipira kwavo kuita TV Studio Boka ltd kukwana kwakakwana kwekuisa Chinyararire Roof zvinhu uye ivo vakabudirira kuisa SRM kune akati wandei matura, matura, TV neFirimu studio matenga uye ndiyo inokurudzirwa mugadziri weSRM.
Kuisirwa kwakapfuura kweSilent Roof zvinhu kunosanganisira akawanda mafirimu uye terevhizheni zvigadzirwa. '1917' Sam Mendes Movie, Iyo Batman kuLeavesden Studios, HS2 mavhidhiyo ekuchengetedza uye zvimwe zvakawanda, tinya pano kuona rumwe ruzivo rwezvichangobva kuiswa zvinyararire padenga zvivakwa paHS2 yekudzidzira nzvimbo muBrackley uye kuLondon Film Studios.
Yakanyarara Denga - Mechanized Kuiswa
Munguva pfupi yapfuura tatevedzera kumakanika kumisheni
maitiro uko kupamhama pakubata kana kushanda pakukwirira i
nyaya. Mufananidzo kurudyi waive wakavhara kwenguva pfupi wedura
yakashandiswa kufirimu yeiyo Sam Mendes WW1 epic '1917'.
Chinhu chakasarudzika chinopwanya mvura inonaya ichidonha pamusoro pemvura yakakwirisa, mvura yemvura inobva yadonha nepakati, yobva yamhanya ichienda padenga remvura uye ichipinda mumvura inonaya mvura.
Iyo Silent Roof zvinhu ndeye UV yakasimba. Nekuda kwekushanduka kwezvinhu zvemukati zvinogona kushandiswa pane chero nzvimbo kuve yakapfava kana yakakombamiswa. Isu takagadzira nzira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza izvo zvinhu kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Ruzha rwemvura inoendeswa kwatiri muchimiro chemasaisai eruzha. Munguva yekudonha kwemvura kuwanda kwakasiyana-siyana kunoenderana nekukanganiswa kwemadonhwe emvura kumusoro kwedenga kunogadzirwa. Denga reimba riripo richange richiita sechinhu chekudzivirira inzwi mune imwe nzvimbo asi pamwe kudzora ruzha rwekunaya kwaisangove kwekutanga kufunga apo denga raivakwa rakavakwa. Kana uchinge wasangana nekuyedza kudzivirira denga kuti rirwisane neruzha rwemvura, iko kwekutanga kufunga kungangove kuwedzera acoustic zvishandiso kurwisa huwandu hwenzvimbo dzeruzha (ruzha rwemvura), irwo rwunobva padenga remba. Chero chimiro chinodedera pane mamwe mafiringi, iwo marata epadenga angave ari esimbi kana macomputer anozozvibata seganda reganda uye kana rakakanganiswa rinoburitsa ruzha. Hazvina musoro here saka kuunza acoustic mishonga yekurapa iyo yakagadzirirwa kugadzirisa iri dambudziko ruzha musoro.
Maitiro akajairwa angave ekuwedzera mashoma padenga. Isu tese tinoziva intuitive kuti denga rakakora kana madziro zvinodzivisa kupararira kweruzha (masaisai eruzha). Saka ita kuti denga rikure kudzikamisa ruzha rwunogadzirwa nekudonha kwemvura, iyi haisiyo mhinduro iri pachena? Iwo unonyanya kuzivikanwa mutemo wekudzivirira inzwi iwo Misa Mutemo. Izvi zvinotaura kuti nekupeta huremu hweacoustic barriers iwe unowana ingangoita yekuvandudza kwe6dB mukudzikisira kurira. Mune mamwe mazwi, kana iwe ukawedzera zvakapetwa kukura kwemasvingo ezvidhinha, semuenzaniso, iwe waizowana kutenderedza 30-40% kuvandudza mukudzivirira inzwi. Zvimwe chetezvo nedenga, asi ikozvino isu tinofanirwa kufunga nezvekuwedzera kurodha kwatave kuda kuunza, iro denga rinogona kutsigira iyi yekuwedzera kurodha uye nemutengo upi uye nekuedza kupi?
KANA KUTI TINOFANIRA KUTARIRA HERE DZAKO ZVINOGONA KUTI PASI PADZIDZO?
Kuwedzera masasi padenga kuri kufungidzirwa kugadzirisa dambudziko rekunaya kwemvura PASI zvaitika. Imwe mhinduro ingangove yekudzivirira kurira kwemvura NGATI isati yaitika? Silent Roof Material (SRM) inoita chaizvo izvo sezvo yakaiswa pane ZVAKANAKA padenga padenga remba iripo pamusoro petafura inotarisana nemvura inonaya. Uyezve, SRM inorema 800gms chete pamamita skwere, chero denga remadziro rinofanirwa kukwanisa kutsigira kuwedzera kuduku uku. Saka panzvimbo pekuwedzera masasi, nzira yekuSilent Roof ichaenda sei kubasa?
Silent Roof Material (SRM) chinhu chakasiyana chigadzirwa icho nemazwi akapusa chinyararire kudonha mvura inonaya pane iyo yepamusoro yepamusoro isina kutamisa ruzha rwemhedzisiro inogadzirwa padenga repasi pevhu. Mvura inonaya inozoyerera nepasuru yeRMM inobva yanyura zvinyoro-nyoro padenga remba uye ichipinda mugadziriro yemvura yekunaya. Yakanyarara Roof ichamisa ruzhinji rwemheremhere yemvura pane chero padenga remhepo kune kungo rira. Izvo zvinyorwa zvakasviba nerudzi uye zvakasimbiswa UV. Nekuda kwekushandurwa kwezvinhu zvemukati zvinogona kushandiswa pane chero nzvimbo kuve yakapfava kana yakakombamiswa. Isu takagadzira nzira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza izvo zvinhu kunzvimbo dzakasiyana siyana.
'Iyo Silent Roof zvinhu chinhu chinoshanduka, chakasiyana-pamhando zvinhu, chakagadzirwa kubva polyamide mafirimu akabatanidzwa pamwechete kwavanoyambuka kuti vagadzire yakaoma, yakavhurika turu. Iyo ine gorofa kumashure kune rumwe rutivi yakagadzirwa kubva kumafiramu mune isina kusarudzika, maviri-chimiro chimiro chakasungirirwa thermally yakasungirirwa kune yakawanda-chimiro chimiro.
Mbiri Metal Roofing Zvivakwa zvakafukidzwa zvizere neanoenderera urefu matema Silent Roof zvinhu, kureba rimwe nerimwe rakachengetedzwa kune iri muvakidzani uye yakabatirirwa kumigumo. Nekuda kweyakavhurika sosi yechimiro chechinyorwa icho chinopa diki kwazvo mhepo inodzivisa nokudaro isingawirirwe nemamiriro ekunze ekunze.
Shandisazve - Chinhu Chakasiyana
Yakanyarara Roof inogona kutamiswa. Uku kushandisa zvekare inzvimbo yakasarudzika yeSilent Roof Material (SRM). Paunotenga chero huwandu hweSMM, unoita mukuziva kuti inogona kuiswa kune imwe nzvimbo yedenga sezvaunoda uye paunoda. Izvi hazvisi zvakadaro kune angangove mamwe marapiro ese anoshandiswa kuwana iwo mhedzisiro yeruzha rwekunaya pane zvivakwa zvemadziro.
Maitiro akajairwa ndeekuedza kudzikisa danho rekusvibisa ruzha PASI zvaitika nekuwedzera acoustic ruzha rwekudzora kupuruzira gomba (s) semuenzaniso pasi pechidziro chedenga.
Silent Roof Matanda anoiswa kune ekunze pamusoro pechimiro chedenga, anomira madonhedza ekunaya achivhara padenga remba saka zvinoshamisa kuderedza mhedzisiro yemvura inononoka PASI zvaitika.
Iwe unobva wave nesarudzo yekukwira iyo SRM, kuendesa kune imwe nzvimbo uye kuishandisa uye iyo kunaya ruzha kuderedza zvivakwa zvakare, uye zvakare, uye zvakare ... Kutenga kumwe, kuwanda kwakawanda.
Ndechipi chimwe chigadzirwa chine ichi chivakwa chekushandisa zvakare zvine chekuita nekusviba kweruzha rwemvura? Kuziva kwedu, HAPANA.
Mufananidzo wekurudyi ndipo pakaiswa Silent Roof Material kubva paMonster Roof muSouthall ndokuiisazve kune yekare Ignition Building muWembley, mufananidzo uri kurudyi ndiwo wekutanga uye mushure mekunge Silent Roof Material yave. yakarongedzwa kune yekare Ignition building.
Zvese izvi zvakaitwa mumazuva e6 kubva pakutanga kusvika pakupera.
Isu takavakirwa kumahombekombe ekumaodzanyemba kweEngland, iwe zvakadaro unogona kunge uine chirongwa mupfungwa kune imwe nzvimbo kunze kweUK. Kana iwe uine mamiriro apo ruzha rwemvura kubva padenga dhizaini irikukanganisa nzvimbo yebasa kana nzvimbo yekugara pasi, Tinogona kuronga kutumira kunze kwedu Kwakanyarara Roof zvinhu kunzvimbo yako chero kwainogona kunge iri pasirese.
Kuiswa kweiyo Silent Roof zvinhu zviri nyore itself uye iwe waizotungamirwa nhanho dzese dzenzira ne-on-line kana runhare rutsigiro kana uye pazvinenge zvichidikanwa.
Iyo Silent Roof Material (SRM) inopihwa mumabhero mita imwe muhupamhi uye inosvika pakureba kwemamita makumi matanhatu pakureba. Iyo mita mita ye SRM iri 1g uye iri 60mm gobvu. Mabhosi anogona kuendeswa pre-akacheka kune chero hurefu hwaunoda kuti yako projekiti ive yakapfava, yakadzika, dhiramu rekodhi padenga nzvimbo.
Taura nesu ikozvino yemitengo uye ruzivo rwekusvitsa.
Bata nesu Pano
Nhare: 07786 576659
Chete mashoma emakambani atinawo kana ikozvino ari kushanda nawo
Chii chinorema cheiyo SR zvinhu
Chii chinorema kuisirwa Silent Roof kuisirwa? Kurema kweiyo Silent Roof zvinhu kungori 800g pachiyero metres. Haisi kuyamwa saka haichengeti mvura yemvura inowedzera kune inotakurirwa pane yakapihwa padenga denga.
Ndeapi ari 'U' & 'R' kukosha
Nezve yedu Silent Roof Material, iyo 'U' uye 'R' kukosha kwezvinhu zvacho hazvina basa kana uchifunga nezvakwo kushandiswa chaiko uko ndiko kudzikisa zvikuru ruzha runogadzirwa nekunaya kwemvura kuchikanganisa padenga remba. Iyo Silent Roof zvinhu haina kugadzirwa kuti ive yekudisa inopisa chigadzirwa.
U-factor uye U-kukosha mazwi anoshandurwa achireva chiyero chekushisa kupora kana kurasikirwa kuburikidza nechinhu nekuda kwemusiyano pakati pemukati nekunze tembiricha tembiricha yezvinhu zvinotaurwa. U-factor kana U-kukosha kunonzi zvakare sekutaurirana kwese kwekushisa kwekushisa. Iyo yakadzika U-kukosha inoratidza zvirinani zvekuchengetedza zvivakwa. Iwo zvikamu ndeBtu / (hr) (ft2) (° F). Iyo Silent Roof zvinhu haina kugadzirwa kuti ive inoshamisira saka iyo 'U' kukosha kwezvinyorwa haina kuverengerwa.
Chigadzirwa Ruzivo / Mhando Sheet
Tinya apa kopi pdf
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uise
Zvinotora nguva yakareba sei kuisa rakanyarara Roof. Kana yaiswa paProfile Metal Roofing (PMR) zvimiro uye nezvimwe, iyo Silent Roof Material (SRM) inongoburitswa pamusoro pemba kubva paave kuenda kumusoro uye pamusoro pechidziro chedenga. Imwe neimwe 'strip' ichave 1m yakafara. Mutsara unotevera wakaradzikwa wakatarisana-pasi kune wekutanga mutsara uye 'wakasonerwa' pamwechete uchishandisa PVC tambo tayi. Mutsetse uyu unobva wapepetwa kuti unorara padyo nemuvakidzani uye maitiro acho achidzokororwa. Kushandisa iyi nzira nzvimbo yakati wandei yedenga inogona kufukidzwa ne SRM munguva pfupi pfupi kazhinji 60 metres mita paawa nechikwata chemaviri fitters zvakajairika.
Yakanyarara Roof yekusvitsa nguva
Yakanyarara Roof yekusvitsa nguva kubva kumuchina wekugadzira kuenda kuUK yedu base inotora pakati pe3 uye 6 mavhiki mushure mekugamuchira yako yakasimbiswa kodhi zvinoenderana nebasa razvino rekutakura.
Hupenyu hunotarisirwa hweSilent Roof
Tine zvimisikidzo zvatova nemakore gumi uye hazviratidze zviratidzo zvekuora. Kubatsira kurarama kwenguva refu kuchenesa kunokurudzirwa kubvisa marara kubva kune matrix ezvinyorwa.
Unogona kurodha iyo Silent Roof Acoustic Report pano
(c) Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa 2007 - 2020 Silent Roof Ltd.
dzinofambiswa ne EMF Online Fomu
Kutenda kunyoresa. Goverana yako yakasarudzika Referral link kuti uwane mikana yekuwana mibairo ..